Minisiteran’ny Tontolo iainana : Hanamafy orina ny fitantanana ny Faritra Arovana -
AccueilSongandinaMinisiteran’ny Tontolo iainana : Hanamafy orina ny fitantanana ny Faritra Arovana
Minisiteran’ny Tontolo iainana : Hanamafy orina ny fitantanana ny Faritra Arovana
13/04/2018 admintriatra Songandina 0
Mba hahafahana miaro hatrany ny tontolo iainana sy hanatsarana ny fari-piainan’ny olona, dia hisy ny fanamafisana orina ny fitantanana ny faritra arovana eto Madagasikara sy ny fitantanana maharitra ny harena voajanahary. Isan’ny tanjon’ny Fanjakana malagasy sy ny ministera tompon’andraikitra ao anatin’izany ny hahatrarana ny fanamby izay napetraka amin’ny fampakarana ho avo telo heny ny velaran’ny faritra arovana eto an-toerana, indrindra taorian’ny nankatoavan’i Madagasikara ny fifanarahan’ny firenena mikambana momba ny karazan-java-manan’aina tamin’ny volana aogositra 1995, izay nohamafisina ny taona 2014 . Faritra Arovana Vaovao (FAV) miisa enina, sy faritr’ala honko miisa telo (mangrove) no voakasika amin’ny tetikasa novatsian’ny Fandaharan’asan’ny Firenena Mikambana ho an’ny Tontolo Iainana na ny PNUE vola izay haharitra dimy taona. “Raha goragora isika teo aloha, dia ezahina apetraka amin’izay ilay tena fitantanana maharitra ireo faritra arovana ireo, ary ny modely havoaka amin’io tetikasa io, no ezahina haparitaka sy hoentina hitantanana ireo faritra 122 hafa “, hoy ny voalazan-dRamiandrarivo Liva, Sekretera Jeneraly eo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo Iainana, ny Haivoary, ary ny Ala.
Nambarany moa fa isan’ny olana goavana sedraina amin’ny resaka fitantanana ny faritra arovana sy isan’ny mampiroborobo ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ao amin’ireo toerana ireo ny resaka ara-bola. “Be dia be ireo mpitantana nomen’ny fanjakana fahefana amin’ny fitantanana no sahirana ara-bola. Rehefa misy tsy fahampiana eo amin’io lafiny io, dia misy olana eo amin’ilay faritra arovana, ary tsy hita matetika ny mpiandraikitra izany. Be dia be noho izany ireo olona alaim-panahy hiditra ao amin’ilay faritra arovana hanao ilay fitrandrahana tsy ara-dalàna”, hoy hatrany ny fanampim-panazavana. Ankoatra izay voalaza, dia isan’ny tanjona ao anatin’ity fanamafisana orina ny fitantanana maharitra ny faritra arovana ity ihany koa ny fanatsarana sy ny fampandrosoana ny eo amin’ny lafiny ara-toe-karena sy ara-tsosialy. Omaly moa no nanaovana ny atrikasa fampahafantarana ity tetikasa ity teny amin’ny Le pave Antaninarenina, izay nampitondraina ny lohahevitra hoe “Fanamafisana orina ny Tambazotran’ny Faritra Arovana Vaovao eto Madagasikara”. Nandray anjara tamin’izany ny solontena avy eo anivon’ny PNUE niaraka tamin’ireo tompon’andraikitra maro avy eo anivon’ny minisiteran’ny Tontolo iainana, ny Haivoary ary ny Ala.
Taorian’ny fanadihadian’ny kabinetra frantsay BEICIP Franlab, rantsa-mangaikan’ny IFP Energies Nouvelles, izay vatsian’ny Banky Iraisam-pirenena vola, mahakasika ny vidin’ny solika eto Madagasikara, voaporofo izao fa manararaotra loatra ireo mpandraharahan’ny solika eto amintsika. Tsy vitan’izay fa mbola ...Tohiny
Faritra Atsimo Andrefana : Natolotra ny vahoaka ny RN9